C/Raxmaan Cirro Oo Markii Ugu Horaysay Si Dhiiran Daboolka Uga Qaaday Dhaliilo Uu U Kaydinayey Xukuumadda Siilaanyo, Kana Hadlay Dhaqaalaha Dalka, Siyaasadaha Khaarajiga Iyo Daakhiliga, Eedo Horleh-Na U Soo Jeediyey Hogaanka UCID | HALBEEG NEWS	Posts | Comments | E-mail / Home
C/Raxmaan Cirro Oo Markii Ugu Horaysay Si Dhiiran Daboolka Uga Qaaday Dhaliilo Uu U Kaydinayey Xukuumadda Siilaanyo, Kana Hadlay Dhaqaalaha Dalka, Siyaasadaha Khaarajiga Iyo Daakhiliga, Eedo Horleh-Na U Soo Jeediyey Hogaanka UCID
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.	“Danyarteennii Ayaan 70% Wax Iibsan Karin, Sicir Bararka Joogtada Ah Waxaa Weheliya Shaqo La’aanta Baahsan Oo Aan Ka Yarayn 65%, Maamul Xumada Komishanka Iyo Faragelinta Xukuumadu Waxa Ka Dhashay Gadood Wal-Wal BadanGeliyey Nabadgalyada Guud Ee Dalka”C/Raxmaan Cirro
Hargeysa, January 3, 2013 (Halbeegnews) – Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Somaliland C/raxmaan Maxamed C/laahi (Cirro) oo sidoo kale ah guddoomiyaha xisbiga Waddani ayaa markii ugu horaysay si dhiiran u soo bandhigay dhaliilaha xukuumadda talada haysa, kaas oo sheegay in sixir barar baahsan iyo shaqa la’aan badani ay dalka ka taagan tahay, isla markaana danyarta wadanku 70% aanay waxba iibsankarin.
C/raxmaan Cirro ayaa waxa uu sidoo kale xusay in maamul xumo iyo faro-galin xukuumadu ku samaysay doorashadii deegaanku ay sababtey khasaare laxaadleh oo ay sababeen mudaharaado khatar galiyey nabadgalyada guud ee dalka, kaas oo xukuumada talada haysa ugu baaqay inay wada-hadal ku eegto xaaladaha noocaas oo kale, foolxumo-na ku tilmaamay in xisbigiisa Waddani lagu tilmaamo muxaafid kaas oo sheegay inay noqonayaan mucaarid wax dhisa oo dawlada dhaliilaheeda soo bandhiga.
Guddoomiyaha Xisbiga Waddani waxa uu sidoo kale eedo horleh u soo jeediyey Guddoomiyaha iyo Musharaxa Madaxwaynaha UCID Eng. Faysal Cali Waraabe iyo Jamaal Cali Xuseen oo uu ku sifeeyey masuuliyiin aan aqoon u lahayn shuruucda wadanka, kaas oo ku dooday inaanu jirin sharci u diidan inuu isku hayo labada xil ee uu isku hayo, kaas oo sidoo kale si qoto dheer uga xog-waramay xaaladaha dalka ee dhaqaalaha, siyaasadaha khaarajiga, daakhiliga.
C/raxmaan Cirro waxa uu sidaas ku sheegay mar uu Maanta ka hadlayey Munaasibad balaadhan oo loogu dabaal-dageyey Xisbi-nimo-da Waddani oo ka qabsoontey Hutelka Maansoor ee Magaalada Hargeysa, taas oo ay ka soo qaybgaleen hogaanada Xisbiyada Waddani, Kulmiye, shirgudoonka Wakiilada, Xildhibaano Guurtida iyo Wakiilada ka tirsan iyo marti-sharaf aad u tiro badan . Ugu horayna isaga oo ka hadlay sida uu u arko eedaha xisbigiisa Waddani looga soo jeediyo inaanu ahayn Mucaarid, ayaa khudbadiisii oo aad u dheerayd, isla markaana qoraal ah ayaa waxa uu ku bilaabay, hadalkiisa sidan:- “Bismilaahi raxmaani raxiim wa salalaahu calaa sayidinaa Muxumed wacaala aalihi wa saxbihii ajamiciin
• Ma’aha mid ku timid guusha waddani cod rooxaani, waa codkii aad idinku siiseen WADDANI ee dhamaa 164 339 cod. Codkan waxa lahaa dhamaan mudanyyasha iska sharaxay WADDANI ee dhamaan Degmooyinka doorasho ee JSL iyo taagerayaashooda kuwaas oo kala ahaa Saylac, Lughayaha, Baki, Borama, Gabiley, Hargeusa, Balligubadle, salaxlay, Berbera, Sheekh, Buhoodle, Burco, Odweyne, Caynaba, xudun, Las caanood, Ceel Afweyn, Gar adag, Ceerigaabo.
Walaalalyaal, waxaad ku bixiseen wakhtigiinna, maalkiinnaa iyo codkiinnaba teegarada Waddani taas oo ka turjumaysa himilada iyo rabitaanka ummadda Soomaliland. Waxaan si gaar u xusayaa musharixiinta aan soo bixin oon leeyahay waa guuleysateen maadamaa codkiina ku soo saarteen Xisbiga WADDANI iyo xildhibaanada Golayaasha ee u soo baxay WADDANI.
Waxaan habalyeynayaa labada xisbi qaran ee soo baxay ee kala ah KULMIYE iyo UCID.
Waxaan mahadnaq iyo bogaadin u dirayaa madaxdii iyo taagerayaashii urarada aan aan soo bixin, waa dadaasheen laakiin intii eebe qoray ayuunbaa soo baxday, WAADANI waxa uu gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhaweynayaa madaxdii iyo taageryaashii aan ururadoodu soo bixin.
WADDANI waa Xisbi Qaran. Waa Xisbi mucaarid ah. Xukuumadda kama mid ah. Xisbul xaakiman ka mid ah. Waa xisbi Mucaarid oo waxa dhisaya . Waa xisbi si cad u tilmaamaya dhaliisha xukuumadda JSL isaga oo ujedadiisu tahay sixitaan iyo toosin. Waxaanu soo bandhigi doonaa siyaasad mucaaridnimon oo dalka iyo dadka dantooda ka turjumaysa. Waxaan halkan fariin u marinayaa siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka Somaliland In WADDANI yahay platformkii ay dalkeenna ku toosin lahayn, aan ku soo bandhi lahayn wixii xukuumadeenna ka khaldan si loo saxo, halkan isugu keen keen.
Waxaa waxlala yaabo ah on Xisbi mucaaridka ah ee UCID cadeeyaan inaanay mucaarid ku ahayn Xukuumadda iyo xisbul xaakimka. Waxay mucaarid ku yihiin WADDANI oo la rabay inay mataanoobaan oo iskaashaan. Waanu ku soo soconaa inaan xukunka qabano ee laakiin weli maanu qaban ee yara suga ayaan leenahay waad degdegaysaan.
Waxaad moodaa in madaxda xisbiayada soo baxay qaarkood xisinimada oo ugu baahnaayeen laba arrimood oo keliya
• Inay helaan mikarafoon ay ka caytamaan
• Inay helaan shadaad xisbinimo oo toban sano ah keliya
Waxaan jeclahay inaan shacbiga u iftiimiyo arrimahan:
Dastuurka Jamhuuriyadda ma ku jiraan xilal uu tilmaamay inaan la isku qaban Karin?
Ha, qaranku waa saddex waaxood sharci dejinta, xukuumadda iyo garsoorka , waxaan dastuurki tilmaamay kala madax banaaninooda. Tusaale, haddii xubin baarlamaanka ah loo magacaabo wasiir waa inay xilka iska casishaa, waxaan ugu dambeeyey wasiirka daakhiliga iyo wasiirka Maaliyadda oon hadda ka mid ahayn.
Gudoomiyaha Golaha wakiiladu ma noqon karaa Gudoomiye urur ama Xisbi?
Dastuurka iyo xeerarka JSL Somaliland midna ma diidayo.
Gudoomiye Faysal ayaa sanad ka baadhayey arrintaas dastuurka iyo xeerarka waanu ka soo waayey. Wuxuu ula tgey Kulmiye. Waxa uu ula tegey uradii siyaasadda. Waxay ku yidhaahdeen arrinta wax diidaya ma hayno. Malaha hadda wuxuu ka baadhayaa arrintaas dastuurka cusub ee PUNTLAND.
Markuu ku xiiqay waxa uu baahday cid ka nasisa. Wuxuuu soo helay Jamaal. Jamaal abtigay hore ayaan ula taliyey waxaan idhi qori nin kale cabeeyey keeba ha qaban.Qorigii ninka kale cabeeyey keebkii ayuu qabtay. Laakiin maantana talo kale ayaan siinayaa.
Sisilada xaydha la yidhaa niman isku deegaan ahaa ayaa isu gabyey. Nin aan ka mid ahayn kooxda isu gabyeysaa oo la yidhaa Guuleed Xawaashe ayaa soo galay silsiladii. Dabeed nin kooxdaas ka mid ahaa oon jeclaysan in Guleed xiiqa soo galo ayaa tix yar ku yidhi Guleed gaboobana maxaa geliyey xiiqdiisa.
Anniga iyo faysal maalintiina waan isu gabaynaa , habeenkkinna waan isu gudnaa ee adigu halkii Guleed Xaashe ha gelin.
Faysal 2003 wuxuu noqday musharax Madaxweyne ee UCID
Faysal 2010 mar kale ayuu noqday musharax madaxweyne ee UCID
Waxa uu labada jeer la galay doorashada Dahhir Riyaale kaahin oo ahaa
Madaxweynaha JSL AHNA Gudoomiyaha UDUB AHNA musharax Madaxweyne ee UDUB sanqadh iyo hadal midna lagama maqal
Tolow manta ma qaylisiiyey?
Weliba labada oday (Faysal iyo Jamaal) waxaan u sheegayaa inaan manta laga bilaabo AH kalena ku darsaday oo ay noqon doonto AHNA AHNA.
Gudoomiyaha Golaha Wakiilada AHNA
Gudoomiyaha Xisbiga WADDANI AHNA
Musharaxa Madaxweynaha WADDANI
Labada oday waxaan kula talinayaa in gartaan cidda la rabo inay mucaard ku noqdaan
Labada oday ha iska dhaafan inay dhagxaan gurtaan oo dadka shidaan iyaga oo guryahooda quraarad ka sameysan yihiin.
Waxaan intaas ku darayaa madaxda UCID may qaadan dardaarankii Eng maxamed Xaashi ee ahaa inay ixtiraamaan dastuurka iyo shuruucda dalka.
Sida ku cad qod 12 Faq 1 iyo 2aad ee xeer Lr 14/2011 muwaadina laba jeer ka badan ma noqon Madaxweyne ama Gudoomiye Xisbi. Gudoomiye faysal wuxuu markii saddexaad ku fadhiistay kuna fadhiyaa Gudoomiyaha UCID taas oo si cad u jabinaysaa xeerkaas dhaqan galka ah.
Guddida Diwaan gelinta ururada waxay sheegtay in xisbiyada ku hubin doonaan ku dhaqanka xeerarka, bal arrintaas dib ha eegaan.
• Mudanayaal iyo Marwooyin; sideynu wada ognahey nabaddu waa gogasha dadkeena iyo gundhigga qarannimadeenna Waa hantida wadareed ee ummaddeenna ka dhaxeysa ee Ilaahay ku mannaystay shacabka Somaliland. Sidaa darteed dhammaanteen axsaab, shacab iyo dawladba waxey innooga baahantahey in aynu wadajir u ilaashano.
• In kasta oo ay qabashada Doorashada golayaahsa deegaanka guul u ahayd Somaliland, hadana waxa soo ifbaxay khalaadaad badan kuwaas oo wiiqdey kalsoonidii shacabka, nidaamkii iyo haybaddii dawladnimo waxeyna halis geliyeen nabadgeliyadeenii iyo wada jirkii ummadeenna.
• Xisibiga Waddani wuxuu u arkaa in halistaasi ka dhalatey doorashooyinka ay masuuliyaddeeda koowaad leeyihiin Komishanka Doorashooyinka Qaranka iyo Xukuumadda JSL.
• Komishanka doorashooyinku wuxuu muujiyey maamulxumo baahdey oo ay ka marag kacayaan go’aannada aan laga fiirsan ee ay ka soo saarayeen natiijooyinkii doorashada, taasi oo ka noqoshadoodiina ay abuurtey xasilooni daro .
• Waxa kale soo baxay cabashooyin ah in xukuumadda Somaliland fara gelisay doorashooyinkii goloyaasha deegaanka iyo u madax bannaanida dhismaha maamulkooda ay ka dhasheen loolan qaybiyey shacabkeenna.
• Maamul xumada Komishanka iyo faragelinta xukuumaddu waxa ka dhashay gadood iyo mudaharaadyo keentey dhimasho iyo dhaawac, walwal badanna gelisay nabadgelyada guud ee dalka
• Mudanayaal iyo marwooyin aniga oo afkii Xisbiga Waddani ku hadlaaya, waxaan tacsi u diraynaa eheladii iyo asxaabtii dadkii ku dhintay mudaaharaadiyadii shacabka inuu naxaariistii janno ugu deeqo eheladooddiina samir iyo iimaan ka siiyo. Waxaan sidoo kale Ilaahey uga baryeynaa dadkii ku dhaawacmayna inuu siiyo caafimaad taam ah oo degdeg ah.
• Mar labaadka, haddii aanu Waddani nahay dadweyne iyo xukuumadba waxaanu leenahay nabadda aan wada dhowro.
“Meel wada hadal u baahan warmo looma qaato”. Dhaqankeenna wanaagsan ayey ka mid tahey inaan wada xaajoodka iyo sharciga ku xallinno dhibaato kasta. Dhinac aan uga soo wada jeesanno waxkasta oo dhaawacaya amnigeenna guud. Xukuumaddana waxaan usoo jeedineynaa iney si xilkasnimo iyo masuuliyadi ku dheehantahey u ilaaliso nabadgelyada, midnimada, horumarka iyo himilada ummadda, sharafta qarannimo iyo xuquuqda shacabkeeda.
5. SIYAASADDA GUDAHA;
• Mudanayaal iyo Marwooyin; Soomaaliland waxey kaga soo badbaaddey duruufo adag, magac iyo maamuusna ku yeelatey talowadaag, isku tanaasul iyo iney qaadatey hannaanka dimoqraadiyada ee ku dhisan axsaabta si aan uga gudubno nidaam beeleedkii.
• Maadaama aan dooranay golayaal deegaan oo shacbigu soo doortay, waa inaan In la daadejiyo maamulka heer degmo awoodna loo siiyo golayaasha deegaanku katalinta horumarka iyo adeegga ay u hayaan shacabka
• In la tayeeyo garsoorka dalka si ay gutaan waajibkooda ilaalinta caddaaladaa.
• In la kobciyo lana tayeeyo adeegga bulshada sida caafimaaka iyo waxbarashada.
6. SIYAASADDA DIBEDDA;
• Mudanayaal iyo marwooyin; Xisbiga Waddani wuxuu aamminsanyahey in Siyaasadda Arrimaha Dibedda ay tiir dhexaad u tahey kor-u-qaadista sumcadda iyo meeqaamka qaranka JSL ku dhex leeyahay bulshada caalamka oo ku qotoma iskaashi, is tixgalin, sinaan iyo isfara-galin la’aan.
• Xukuumadda Somaliland waxa looga baahan yahay inay u iba bixiso siyaasaddda arrimaha JSL, kuna hagto siyaasad cad oo fog inay abuurto wax shaki gelin kara shacbiga, wadadhadalda Somalia iyo Somalilandna waan in tiir dhexaad u nqotaa gooni isu taagga iyo Madax banaanida JSL.
• Xisbiga Waddani waxaa ka go’an, dhowrista madaxbannaanida, raadinta himiladda ummadda iyo kor u qaadidda kaalinta ay kaga jirto caallamka, xoojinta xidhiidhka iyo iskaashiga dawladaha jaarka.
• Xisbiga Waddani wuxuu si hagar la,aan diyaar ugu yahay ka talo bixinta geeddi socodka hannaanka dawladnimo, iyo baahida loo qabo tayeynta mu’asasaadka xukuumadda oo sidaan aragno saldhig u ah horumarka siyaasadda, dimuqraadiyadda, dhaqaalaha, ahna muraayadda laga dheehan karo kartida iyo dhismaha hay’daha dawladda oo horseedi karta kalsoonida shacabka iyo taageerada beesha caalamaka ee qaddiyadda Soomaliland..
• Mudanayaal iyo Marwooyin; Dhaqaaluhu waa hal-bawlaha Qaranimada, waana lafdhabarta nolosha bulshada iyo tiirararka dawladnimo ka ugu muhiimsan. Inkastoo uu ganacsiga xorta ahi kordhey haddana waxaa muuqata in nidaamkii lagu maamuli lahaa dhaqaaluhu curyaan yahey. Wax soo saarkii dalkeenna iyo nolosha deegaankeennii miyiguba way sii gudhayaan, faqriga iyo baahida ka dhalatey waa mid guri kasta ku soo hoyaneysa oo aynu wada arkeyno.
• Weli ma jiro nidaam maalgashi bangiyo, hanaan maamul lacageed oo hufan, taasi oo curyaamisey dhaqdhaqaaqii kobcin lahaa wax soorka gudaha, cuntada iyo warshadaha fudud, oo hawlgelin lahaa xoogga soo koraya dhallinayardeenna wax baratey. “Ciddaan hanannin quut keedu, qarannimo ma hantido”
• Waxaa maalin kasta sii kordhaya sicir bararka daruuriyaadkii nolosha oo ka dhashey qiimaha dollarka iyo lacagaha qalaad ee aan is taageyn keeneteyna ineysan danyarteennii 70% wax iibsan karin, sicir bararka joogtada ah waxaa weheliya shaqo la’aanta baahsan ee aan ka yarayn 65%, dhibaatada qaadka ee kartidii, iyo hantidii ummaddaba lumiyey.
• Haddii aanu nahay Xisbiga Waddqani waxanu soo jeedinaynaa:
? In si degdeg ah loo abuuro habkii maamulka lacagta iyo baananka
? In lacagta qaadka inagaga baxda loo helo wax lagu bedelo oo laga iibiyo dalalka qaadka innoo soo dhoofiya.
? In la dhiirrigeliyo maalgashiga gudaha ee ganacsatadeenna iyo midka shisheeyaba.
Ugu Danbeyn Xisbiga Waddani waa madal ay ku kulmeen aqoonyahankii dalka, culimadii ummadda, iyo waxgaradkii bulshada, madax dhaqameed, dhallinyaro iyo haweenba wuxuuna hiigsanayaa isagoo ka duulaya mabaadii’diisa waddaninimo, kaashanaya taageerada hagar la’aanta ah ee shacabkiisa. ‘inuu horseedo ummaddiisa guulo taariikhda gala isla markaana xaqiijiyo:
qaran madax-banaan oo sharaf iyo karaamo ku naalooda, shacbigiisuna xor ka yahay jahli, faqri iyo qabyaalad kala qoqobta;
qaran ku qotoma nidaam dimoqraadi ah (talo-wadaag) oo waafaqsan diinta Islaamka, dhaqanka iyo hiddaha aynu leenahay;
qaran midaysan oo ku dhisan wadaniyad, sinnaan iyo cadaalad”.
This post has been viewed 856 times.	Categories: featured, today's top stories
The Most Popular PostsDaawo Video:Mudanayaasha Go... (39501) Job advertisement: GOLLIS... (14617) Goorma Ayuu Madaxweynaha S... (13514)Khudbaddii Madaxweynahii Ho... (13403)Sir Halbeegnews Heshay: Xuk... (12796)About (8969)Halbeeg Location (8870)Maxaa Loo Doortay Baarlamaa... (8853)Somaliland discusses need f... (8102)Contact (7881)Vacancy Position UNICEF: Ch... (7526)Halkan Ka Daawo Barnaamij T... (7396) (6747)Warsaxafadeed Madaxtooyada ... (6320)Halbeegnews Oo Heshay Liisk... (6250)Somalis Underpin Fozia Yusu... (6173)Akhriso Beelaha Ay Ka Soo K... (5915)Daawo Video: Telefishanka Q... (5890)Warbixin Jariiradda The Sec... (5876)Wergeyska Faransiiska Ah Ee... (5861)Haweenaydii Ugu Horaysay Ee... (5849)Waa halbeeg news’o Halyey... (5595)Ogaysiis: Munaasibad lagu d... (5592)dawlada KMG ah oo saaka dag... (5560)Badhasaabkii Hore Gobolka S... (5538)Hees Cusub Maryan Mursal Ci... (5459)C/Raxmaan C/Qaadir Oo Ka Xo... (5213)Sawir Gacmeed Sameeyaha Muk... (5198)Hees Cusub Oo La Magac Baxd... (5175)Xoghayaha Arrimaha Dibadda ... (5074)Haayadda Qaramada Midoobay ... (5071)Sawir Gacmeedka Caawa Waxaa... (4988) (4940)Halbeeg Video: Daawo Xuseen... (4920) (4831)Amiin Arts Muxuu Ka Yidhi G... (4779)Education Watch (4737)Vacancy UNDP Hargeisa: Comm... (4719)Tirinta Cododka Oo Badiba G... (4673)Ku Xayaysiiso Halbeeg (4629)Somaliland Media Law (4554)Media Ethics (4538)Guddoomiyahii Koomiishanka ... (4444)Akhriso Shaxda Natiijadda K... (4436)Ceebtii Ugu Fadeexadda Weyn... (4409)Listen Quran (4384)MIGRATION & GENEOLOGY OF SH... (4251)Hawraarta Halbeegnews: Ma R... (4210)Xagla-toosiya Oo Cidla Dira... (4162)Codkii Macaana Cabdiqaadir ... (4077)Garadag’s Set Of Laws Are... (4011) (4005)Natiijaddii Doorashada Degm... (3966)Somalia: Tough Foreign Poli... (3938)Daawo Sawirada Muraaradilaa... (3842)Somaliland at 20: A Paradig... (3724)Daawo Video: Hees La Magac ... (3724)Halkani Ka Akhriso Lacagta ... (3715)Hawl-wadeenadda Koomiishank... (3659)Kiis Xasaasi Ah Oo U Dhexee... (3628)Sir Laga Hellay Emailka Mad... (3581)Fadeexado Shaaca Ka Qaaday ... (3459)Halbeegnews Oo Heshay Xogo ... (3448)Somaliland-Djibouti Relatio... (3417)Sawirka Maanta:Faysal Cali ... (3392)Xog Culus Oo Shabakada Halb... (3370)Natiijaddii Horudhaca Ahayd... (3341)Hailemerium Desagne Ra'isal... (3325)radio (3320)Toos Live Halkani Halbeegne... (3314)Halbeeg Archives	Select Month May 2013 (189)